Ogaden News Agency (ONA) – Waxaqabadkii Gudiga Qoxootiga S.Ogadenia ee Dalka Yemen iyo Filim Bandhig-faneed ay dhigeen
Waxaqabadkii Gudiga Qoxootiga S.Ogadenia ee Dalka Yemen iyo Filim Bandhig-faneed ay dhigeen
Wariyaha Wakaaladda ONA ayaa warbixin ka soo diyaariyay waxqabadka Gudiga Qoxootiga Ogadenaia ee dalka Yemen. Haya’dan ayaa ah Hay’ad Samafal oo ka diiwaan gashan Hay’ada UNHCR & Dawlada Yemen. Gudiga maamula qaxootiga dalka Yemen jooga waxaa la dooratay sanadkii 2009kii wakhtigii la doortay ilaa iyo maantana waxay u taagan yihiin waxqabadka bulshada S.Ogadenia ee ka soo cararay gumaadka aan aabayeelka lahayn ee kasocda Ogadenia oo gumaysiga madaw ee Abyssinia uu ku hayo. Markaan waresanay dadka qaxootiga ah ee dalkaa joogana waxay nooga warameen inay ku kalsoon yihiin waxqabadka gudigan oo ah mid iskii isu-xilqaamay kuna shaqeeya iskaa wax uqabso, waxtar aan la koobi karina u keenay shacabka ku tabaalaysan xeryaha qaxootiga ee dalka Yemen. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee gudigu intuu jjiray u qabsoomay waxaa kamida;
1. Ka dhaadhicinta haya’adda UNHCR & Dawlada Yemen dhibka uu shacabka Ogadenya ee maganta u ah dalka Yemen uu ka soo qaxay.
2. In loo aqoonsado inay yihiin dadkani qoxooti oo aynan ahayn dad nolol raadis ah, kadibna lasiiyo Aqoonsi uu ku joogo dalka.
3. Fashilinta iskudaygii cadawgu uu damcay mararbadan inuu kaga hortago aqoonsiga qoxootinimada oo ay safaarada itobiya ku doodo mararbadan inayna jirin wax qoxooti ah oo dalkeeda ka jooga Yemen dadka soo galayana ay yihiin nolol raadis iyo shaqotag taas oo wajigabax iyo fashilaadi ka raacday markii ay qabatay UNHCR dood dhagaysi ah oo ay dhamaan ka soo qayb galeen hay’adaha xuquuqul insaanka iyo safaaradaha Dalka Yemen jooga oo ay kamid tahay ta cadawgu.
4. Waxaa kaloo hay’ada Gudiga Qoxootiga S.ogadenia ee Dalka Yemen ay UNHCR ka dhaadhiciyay inay lagama maarmaan tahay in xarun loo kireeyo dhibanayaasha reer Ogadenia taas oo lagu guulaystay.dadaal badan kadib. Waxaa kaloon meesha ka madhnayn markii gurigan lagu guulaystay kirayntiisa inay qolyihii Ajo-gudhay ee Hawaarinta ku biiray ay ku doodeen inay iyaguna qoxooti yihiin xaqna u leeyihiin inay kaalintooda ka qaataan gurigan iyo hawlihiisa.
Arintaas ayuu maamulka gudiga sutida u qabtay afkana dhulka u galiyay oo fool xuma badan ay ka raacday, markii damabana ay ku dacwoodeen gurigii inuu gacanta u galay dadyar oo urur (ONLF)ah, hasa yeeshee sumcada ay gudigu ku leeyihiin Hay’adaha agtooda darteed aan dheg jalaq loo siin dacwadihii beenta ahaa ay direen.
Waxqabadka gudiga halkan kuma soo koobi karo lakiin hadii aan tusaale soo qaato bishan 1aad ee sanadkan hada biloowaday 2013 waxay gudigu galeen oo ay lagaleen UNHCR iyo Dawlada Yemen shirar farabadan kuwaas oo lagag haadlayay qadiyada S.Ogadenia kuwaasoon ku rajo waynahay inay guulo waawayni ka soo bixi doonaan mustaqbalka dhaw iyo midka dheerba. Wadahadalkii ugu danbeeyayna wuxuu dhacay 15/1/2013 kaasoo Gudiga Qoxootiga S.Ogadenia ee Dalka Yemen ay la kulmeen ninka ugu sareeya Hay’ada NUHCR Dalka Yemen xogwaran dheerna ka siiyeen dhibaatada qoxootiga S.Ogadenia ku haysata dalkan ay martida u yihiin ee Yemen iyo dhibka ay ka soo cararayaan. Warbixintaas ayuu aad ula dhacay mas’uulkaasi wuxuuna balanqaaday inuu qoxootiga Ogadenia u bandhigi doono xaaladooda wadamo badan oo Aduunka kamida sidii dadkan xalwaara loogu heli lahaa.